ỊHAZI OGHERE NGOSI NA FIREFOX - MOZILLA FIREFOX - 2019
Ịhazi njirimara egosiputa na Mozilla Firefox nchọgharị
Nwelite ọzọ nke Mozilla Firefox wetara mgbanwe dị ukwuu na interface, na-agbakwunye bọtịnụ nhọrọ pụrụ iche nke na-ezobe isi ngalaba nke ihe nchọgharị ahụ. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu a ga-esi ahaziri otu a.
Ogwe awara egosiputa bụ Mozilla Firefox nhọrọ pụrụ iche nke onye ọrụ nwere ike ịnweta ngwa ngwa nke ihe nchọgharị. Site na ndabara, panel a na-enye gị ohere ịga ngwa ngwa na ntọala ihe nchọgharị, mepee akụkọ ihe mere eme, malite ihe nchọgharị ahụ na ihuenyo zuru ezu na ndị ọzọ. Dabere na onye ọrụ achọrọ, bọtịnụ na-enweghị isi site na panel a gosipụtara nwere ike wepụ site na ịtinye ndị ọhụrụ.
Esi esi melite panel gosipụtara na Mozilla Firefox?
1. Mepee ọnụ ọgụgụ egosiputa site na ịpị bọtịnụ ihe nchọgharị. N'okpuru ala, pịa bọtịnụ ahụ. "Gbanwee".
2. A ga-ekewa windo ahụ ụzọ abụọ: n'akụkụ aka ekpe nwere bọtịnụ nwere ike ịgbakwunye na panel ahụ gosipụtara, na n'aka nri, n'akụkụ nke ọzọ, ọnụ ọgụgụ ahụ gosipụtara n'onwe ya.
3. Iji wepụ bọtịnụ mgbakwunye site na kọntaktị ahụ gosipụtara, jide bọtịnụ na-enweghị isi na òké ahụ ma dọrọ ya na pane aka ekpe nke windo ahụ. Na izi ezi, na ntụgharị ihu, bọtịnụ na-agbakwunye panel.
4. N'okpuru ebe a bụ bọtịnụ "Gosi / Zoo Panels". Site na ịpị ya, ịnwere ike ijikwa ogwe abụọ na ihuenyo: ihe nchịkọta mmanya (gosipụtara na mpaghara kachasị elu nke ihe nchọgharị, nwere bọtịnụ "Njikwa", "Dezie", "Ngwaọrụ", wdg.), Yana ebe ibe edokọbara (n'okpuru ebe nkesa ihe omuma ihe nchọgharị ga-abia).
5. Iji chekwaa mgbanwe ma mechie ntọala nke panel ahụ gosipụtara, pịa akara ngosi ahụ na obe n'obere taabụ. Agaghị ekpuchi taabụ ahụ, ma mechie ntọala ahụ.
Mgbe i jiri minit ole na ole setịpụ panel ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi Mozilla Firefox n'ụzọ zuru ezu, na ị na-eme ka nchọgharị gị dịkwuo mfe.